Oko sizakushiya ngasemva, ilifa lethu. Imibhalo yeenyawo, nguDavid Farrier
Baza kusibona njani kwikamva? Ngamanye amagama, ngumcimbi wokucinga okwishumi elivisayo ukusukela kunyaka wama-3024, nokuba loluphi uhlobo, phambi kwencwadi yokufunda malunga nobuntu eyayihlala kwihlabathi ngexesha lokuncwina kwethu kwindalo iphela.
Mhlawumbi umntwana ofikisayo uya kucinga ngendlela engaqhelekanga ukuba sasinjani (sisole, sinjalo). Kwaye ke kuyakubakho umembi wezinto zakudala ozakufumanisa izinto zethu ezincinci, ukusuka kuDavid Michelangelo, esele zenze iimpungutye ezimbalwa, ukuya kwincwadi yokugqibela kaBelén Esteban, ukuphikisana kwexesha, ukuthanda idayisi kaThixo ...
Inkqubo ngokwayo yokuba siza kukhunjulwa njani ithathelwe ingqalelo ngamanye amaxesha. Kodwa ngoku, kunye ukwahlukanisa ukuziva ukuba akukho nto yayilawulwa njengoko sasicinga I-adocenados kwithemba lehagu elisafumana ii-acorn kwidlelo elijonge esiphelweni sehlabathi. Into inenqaku le intsomi yesayensi, kunye nokuqiniseka okungenakuphepheka.
Xa kanye UIrene Vallejo, enye yeengqondo ezikwaziyo ukushwankathela ingxelo, ubunyani kunye nothando lwehlabathi lakudala, icebisa oku kufundwa ngombono wayo wento enokuthi ithathwe kuthi xa kushiyeke izithunzi kuphela, ngaphandle kwamathandabuzo asinakuphoswa.
UDavid farrier usimema ukuba sicinge ngendlela esiya kukhunjulwa ngayo kwiintsomi, kumabali nakwiilwimi zezizukulwana ezizayo. Kuba ngomso iplanethi yethu iyakwenziwa ikholoni ngumsebenzi wethu wangoku wabantu, ngotshintsho lwendalo, ukuxhaphaza ubutyebi bendalo kunye nokuveliswa kwenkunkuma yexesha elide. Amathambo exesha elizayo e-Anthropocene ayinxalenye yelifa lethu kwaye, ngaphezulu kwako konke, acacisa ixesha lethu.
Imitya yonyawo Idibanisa imbali kunye ne-ecology, uncwadi kunye nesayensi, ukuhamba kunye nefilosofi ukuguqula uninzi lweembono zethu kwangaphambili, zoba ii-analogies kunye namanye amaxesha okuthatha isigqibo kwixesha elidlulileyo kwaye usibonise ukuba, ebusweni bokuzimisela, kukho ezinye iindlela kunye nokungaziwa kwindawo emangalisayo ingxoxo phakathi kwexesha elidlulileyo, elangoku nelizayo.
Sisebenzisa ubomi bakhe kunye namava ophando, sihamba neFarrier ukusuka kwiBaltic ukuya kwiGreat Barrier Reef, ukusuka eShanghai ukuya eTasmania, ukufumana ilizwe eliguquka ngokukhawuleza, kwaye neziphumo zalo azizukutshintsha indlela yethu yokucinga ngekamva, kodwa itshintshe nendlela esilibona ngayo ihlabathi namhlanje.
Ngoku ungathenga incwadi «Huellas», nguDavid Farrier, apha:
Iilebula UDavid farrier, Iincwadi zesayensi, Iincwadi ezisisincoko
Amagqabantshintshi e-1 nge «Imizila yeenyawo: Ukukhangela umhlaba siza kushiya ngasemva, nguDavid Farrier»
Pingback: Funda .. Malunga nexesha naManzi, nguAndri Snaer Magnason